Inés del Alma Mía: ụtụ Allende maka ndụ Inés Suárez | Akwụkwọ ugbu a
Ines nke mkpụrụ obi m
John Ortiz | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela
Ines nke mkpụrụ obi m bụ akụkọ ihe mere eme nke onye edemede ama ama Isabel Allende. E bipụtara na 2006, nkata ahụ na -akọ ahụmịhe nke onye mmeri nwere obi ike na onye Spain bụ Inés Suárez na ọrụ ndị isi ya na nnwere onwe Chile. Ọ bụ akụkọ mere eme nke na -akọ akụkọ ihe mere eme, mfu na mgba nke ọtụtụ ndị ịhụ mba n'anya na Latin America, ọkachasị na ndị Spanish jidere Chile.
Allende mere nyocha zuru oke n'ime ihe ndị mere iji mee ka ọrụ ahụ bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi dịka o kwere mee.. Na mgbakwunye na nsọpụrụ a ma ama nke a na -akwụ Inés Suárez, akwụkwọ ahụ na -egosipụta ahụmịhe na esemokwu nke ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ dị mkpa, dịka: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia na Rodrigo de Quiroga. N'afọ 2020, Prime Video wepụtara usoro ihe nkiri a na -atọ ụtọ maka akwụkwọ akụkọ, nke RTVE, Boomerang TV na Chilevisión mepụtara.
1 Nchịkọta nke Inés del alma mía
1.1 Mmalite akụkọ
1.2 Europe (1500-1537)
1.3 Mmalite na America (1537-1540)
1.4 Njem na Chile (1540-1541) na ntọala Santiago de Extremadura (1541-1543)
1.5 Mwakpo na Santiago
1.6 Afọ siri ike (1543-1549)
1.7 Afọ gara aga
2 Banyere onye edemede, Isabel Allende
2.1 Akwụkwọ Isabel Allende
Na nchikota nke Ines nke mkpụrụ obi m
Mgbe ọ dị afọ 70, Inés Suárez —Amakwaara dị ka Inés de Suárez— malitere ide akụkọ banyere ndụ ya. Ebumnuche ide ụdị akwụkwọ edetu a bụ ka nwa nwanne ya nwanyị bụ Isabel gụọ ya na echefula ihe nketa ya. Tụkwasị na nke a, ọ na -agụ nwanyị ochie agụụ ka ọ bụrụ otu ụbọchị iji ihe ncheta maka omume ya sọpụrụ ya.
Agnes mụrụ na Plasencia (Extremadura, Spain), n'ime ezinụlọ dị umeala n'obi. Site na afọ asatọ, ike ịkwa akwa na ịkwa akwa nyere ya aka ịkwado ezinụlọ ya. N'ime izu ụka dị nsọ zutere Juan de Málaga, onye ọ dọtara site na mgbe mbụ. Ruo ihe karịrị afọ atọ, ha nwere mmekọrịta ịhụnanya. Mgbe e mesịrị ha lụrụ nwanyị kwaga ebe ọzọ na Malaga.
Mgbe afọ abụọ n'enweghi ike ịtụrụ ime, alụmdi na nwunye ha ghọrọ nke iro. Juan kpebiri ịgbaso nrọ ya wee banye n'ime ụwa ọhụrụ, ọ laghachiri na Plasencia, ebe ọ natara ozi banyere ya na Venezuela. Mgbe ichere ogologo, Inés nwetara ikike eze izute di ya. Ọ banyere Amerịka ịchọ ya na nnwere onwe nke ọ na -achọsi ike.
Mkpụrụ obi m ...
Mmalite na America (1537-1540)
Mgbe ọtụtụ njem gasịrị, Inés rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri Callao na Peru, n'oge na -adịghị anya, ya na ndị fri gara n'obodo ndị eze (nke bụ Lima ugbu a). Ebe ahụ ka ọ jụrụ ajụjụ maka di ya, na n'ikpeazụ achọtara Onye agha onye maara ya, nke a gwara ya na Juan anwụọla n'agha Las Salinas. Site ebe ahụ, Inés kpebiri ịga Cuzco ịchọ azịza nke amaghị ama banyere di ya nwụrụ anwụ ugbu a.
N'oge na -adịghị anya, okwu gbasara na nwanyị di ya nwụrụ nọ n'ala ndị ahụ, n'ihi nke a, Gọvanọ Marquis Francisco Pizarro chọrọ izute ya. Mgbe ọ jụsịrị Inés ajụjụ ọnụ - onye gosipụtara na ọ chọghị ịlaghachi Spain -, onye ọchịchị ahụ nyere ya ụlọ ọ ga -ebi. Ozugbo etinyere ebe ahụ, Inés zutere Pedro de Valdivia, onye ya na ya nwere njikọ na mbụ, site n'oge ahụ ha abụọ ghọrọ nkewa.
Valdivia chọrọ ịtọhapụ Chile, dị nnọọ ka Diego de Almagro nwara ozugbo; mgbe ị na -ekwu okwu na Agnes, ọ O kwuru na ya ga -eso ya. Ha jikọtara ọnụ na Obodo Ndị Eze ịrịọ ikike n'aka Pizarro, onye, ​​mgbe mkparịta ụka nwa oge gasịrị, kwadoro arịrịọ ahụ. A) Ee, ha abụọ malitere njem ahụ site n'ụzọ ọzara, Juan Gómez, Don Benito, Lucía, Catalina na ọtụtụ ndị agha so ya.
Njem na Chile (1540-1541) na ntọala Santiago de Extremadura (1541-1543)
Maka njem ahụ ha ji maapụ Diego de Almagro sere, onye kere ya ka ọ nwee ike duzie nloghachi ya. Ka anyị nọsịrị njem n'ime ọnwa, ha mara ụlọikwuu ruo ọtụtụ izu na Tarapacá ka ha na -eche nkwado. Ugbua mgbe ha kwụsịrị inwe olileanya, otu ndị nwoke Rodrigo de Quiroga na ndị isi dịka Alonso de Monroy na Francisco de Villagra rutere.
Izu abụọ ka e mesịrị, ha malitere ozi siri ike site n'ọzara. Valdivia, Inés, ndị nwoke ha na Yanaconas jisiri ike rute ala Chile n'ime ọnwa ise. Na February 1541, na mgbe ọ merichara ọtụtụ mwakpo ndị iro, Pedro de Valdivia kpebiri iguzobe obodo Santiago de la Nueva Extremadura. Ekesara ala na ọnwa ole na ole ebe ahụ bara ọgaranya maka mmadụ niile.
Mwakpo na Santiago
Na Septemba 1541, mgbe Valdivia na -anọghị na Santiago, Inés gwara Quiroga, n'ihi na igwe mmadụ na -abịakwute ha. Otu a siri malite nnukwu ọgụ maka ichekwa ókèala ahụHa nwere ike ịchịkwa ọnọdụ ahụ, n'agbanyeghị na obodo ahụ bụ mkpọmkpọ ebe, ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ na ndị merụrụ ahụ. Ines nwere ọmarịcha arụmọrụ n'ọgụ ahụ, ya na ndị nwoke lụrụ ọgụ ruo na njedebe.
Valdivia rutere mgbe ụbọchị anọ gachara; Ọ bụ ezie na ọ na -ewute ya, ọ gbara ha ume ka ha malite ọzọ, na -eti mkpu: "Santiago ma mechie Spain!"
Afọ siri ike (1543-1549)
Mgbe Santiago mebisịrị, ha niile chọrọ ịlaghachi Peru, mana Valdivia ekweghị ha. Kama, ọ rịọrọ Cuzco maka nkwado iji wughachi obodo ahụ; mgbe nke ahụ na -eme, ha biri afọ abụọ nke oke nhụsianya. Mgbe enwere mmekorita ya na obodo Inca, ha zigara ngwa ahịa ihe niile wee malite ịka mma, ya mere akpọrọ Santiago isi obodo alaeze ahụ.
Valdivia Ahụ erughị m ala, ọ dị mma chọrọ ịtọhapụ mpaghara ndị ọzọ na Chile —Ndị Mapuches na -achị ya - ma na -etinye aka na ihe omume na Peru. N'oge na -adịghị anya, ya na ndị ọchịagha ndị ọzọ biliri, ihe na -amasịghị onye ọ bụla n'ime ndị na -eso ụzọ ya, onye na -elekọta Villagra. Mgbe ọpụpụ nwoke aInés chere na a raara ya nye na ka oge na -aga ọ gbabara na ogwe aka Quiroga.
Afọ gara aga
Na 1549, ndị agha abụọ si La Serena - Obodo tọrọ ntọala ọhụrụ-ha rutere Santiago na ozi na ndị India wakporo ha. N'oge na -adịghị anya, ọgba aghara ahụ ga -erute ha, n'ihi nke a oke ụjọ batara n'etiti ndị ọbịa. Ekpebiela na Villagra ga -aga n'ihu idozi ọnọdụ ahụ, o nwetara nkwekọrịta udo, mana ọ dịtụghị nwayọ, onye ọ bụla chọrọ ka gọvanọ lọta.
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke ọgụ, Valdivia nwere ike ịpụ na Peru, mana obere oge mgbe Viceroy La Garza kpọrọ ya. Pedro chere ọtụtụ ebubo ihu, n'ihi ya ọ laghachiri ikpe ikpe ziri ezi. Ọ bụ ezie na nwoke a gosipụtara na aka ya dị ọcha, ahịrịokwu ahụ rịọrọ ka a napụ Inés akụ ya wee laghachi Peru ma ọ bụ Spain.
Inés jụrụ ịhapụ Chile, ya mere, kpebiri ịlụ Rodrigo de Quiroga, ebe ọ bụ na n'ụzọ dị otu a ọ gaghị atụfu ihe onwunwe ya, ọ gaghịkwa apụ. Ọ swụrụ iyi maka ịhụnanya ebighị ebi na ntụkwasị obi nye nwoke a, onye oge ụfọdụ gara aga lekọtara nwa ya nwanyị Isabel. Ha abụọ nọrọ ọnụ ogologo oge —Mgbe ha nwụrụ - ha wee lụso ndị Mapuch ọgụ na mwakpo mbụ ha.
Banyere onye edemede, Isabel Allende
Onye edemede Isabel Angelica Allende A mụrụ Llona na Ọgọst 2, 1942 na Lima, Peru. Nne na nna ya bụ Tomás Allende Pesce na Francisca Llona Barros; mgbe ha gbara alụkwaghịm na 1945, Isabel soro nne ya na ụmụnne ya gaa Chile, ebe ọ nọrọ ọtụtụ afọ.
Mgbe mgbagha ahụ dara na Chile na 1973, Allende na di ya na ụmụ ya ga -eje biri na Venezuela (site na 1975 ruo 1988). Na 1982, o bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ ya: Ụlọ nke mmụọ; N'ihi ọrụ a, o nwetara nnukwu ugwu n'ụwa niile. Ruo taa, onye edemede a ma ama ebipụtala ihe karịrị akwụkwọ iri abụọ, nke o ji merie ihe karịrị nde mmadụ iri asaa na ise na -agụ akwụkwọ gburugburu ụwa.
Ụfọdụ n'ime ihe okike ya kacha pụta ìhè bụ: Atụmatụ enweghi ngwụcha (1991), Paula (1994), Obodo anumanu (2002), El Zorro: akụkọ a malitere, Inés del alma mía (2006), Akwụkwọ edemede Maya (2011), Onye Japan hụrụ n'anya (2015); na post ọhụrụ ya: Umu nwanyi nke nkpuru obim (2020).
Akwụkwọ Isabel Allende
Oflọ Mmụọ (1982)
Nwanyị ebu amịrị (1984)
Nke Lovehụnanya na Onyunyo (1984)
Njirimara nke Eva Luna (1989)
Atụmatụ enweghi ngwụcha (1991)
Nwa ada (1998)
Eserese na sepia (2000)
Obodo anumanu (2002)
Obodo m chepụtara (2003)
Alaeze nke dragọn ọlaedo (2003)
Ọhịa Ndị Aka (2004)
El Zorro: akụkọ a na -amalite (2005)
Ines nke mkpụrụ obi m (2006)
Ngụkọta ụbọchị (2007)
Ndị hụrụ Guggenheim n'anya. Ọrụ nke ịgụta ihe (2007)
Agwaetiti dị n'okpuru oké osimiri (2009)
Akwụkwọ edemede Maya (2011)
Egwuregwu Ripper (2014)
Onye Japan hụrụ n'anya (2015)
Karịa oge oyi (2017)
Osisi petal ogologo (2019)
Umu nwanyi nke nkpuru obim (2020)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Ines nke mkpụrụ obi m
Nkebi ahịrịokwu 30 ahọpụtara gbasara akwụkwọ
Rosa Chacel. Ncheta ọnwụ ya. Eke a họrọ ahọ